မတ်လကစပြီး ၅ထောင်ကျပ်ရှိရုံနဲ့ ထိုင်းအစားအစာတွေကို ဘူဖေးစားနိုင်ပြီနော် – FoodiesNavi
မတ်လကစပြီး ၅ထောင်ကျပ်ရှိရုံနဲ့ ထိုင်းအစားအစာတွေကို ဘူဖေးစားနိုင်ပြီနော်
By yin sandi On February 27, 2018 0
ထိုင်းရိုးရာအစားအစာတွေကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှ မရရှိနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ အဝစားသုံးနိုင်မယ့် တန်မှတန်တဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးအကြောင်းကို Foodies Navi ကနေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ထိုင်းရိုးရာဟင်းအမယ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်ကို စိတ်ကြိုက်အဝတီးနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးကတော့ ခြံအမှတ်(၉) ၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းမကြီး ၊ သုဝဏ္ဏပန်းခြံအနီး ၊ သုဝဏ္ဏ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Thai Taste ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အဝတီးနိုင်မယ့်ထိုင်းဟင်းလျာတွေကတော့ ? ဂဏန်း ၊ ? ပုဇွန် ၊ ငါး ၊ ဂုံး ၊ ?ကင်းမွန်၊ပြည်ကြီးငါးတွေ၊ ရောသမမွှေထောင်းထားတဲ့ရှူးရှူးရှဲရှဲအထောင်းမျိုးစုံ ၊ချိုချဉ်ငံစပ်ထုံအရသာစုံတဲ့ အသုပ်မျိုးစုံ၊ ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ ဝက်ကလီစာ၊ ထိုင်းထမင်းကြော်၊ ဆန်ပြားကြော်၊ ဖတ်ထိုင်းစတာတွေကို အားပါးတရစားနိုင်မယ့်အပြင် သစ်သီးတွေနဲ့အချိုရည်တွေကိုလည်း အချိုတည်းနိုင်ဦးမှာဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲနော်။ ထိုင်းရိုးရာစတိုင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကလေးထောင်းထားတဲ့ ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်း ၊ ပြောင်းဖူးချိုချိုလေးကို ချဉ်စပ်လေးထောင်းထားတဲ့ ချိုချိုချဉ်ချဉ်ပြောင်းဖူးထောင်း ၊ အသားအပြည့်ပါတဲ့ ဂဏန်းလေးတွေကို မူလအရသာပျောက်မသွားစေဘဲ ချဉ်စပ်အရသာလေးတွေပါ ထပ်မွှမ်းထားတဲ့ ဂဏန်းထောင်း ၊ ငါးရံ့အရသာချိုချိုလေးကိုမှ အကင်ရနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မယ့် ငါးရံ့ဆားကင် ၊ ဝါးကြည့်လိုက်တိုင်း လျှာပေါ်ဝဲပျံနေတဲ့ အသားအရသာလေးကို ခံစားရစေမယ့် ဝက်ဂုတ်သားကင် ၊ မာဆလာနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ချဉ်စပ်အရသာလေးကို တွဲဖက်ခံစားနိုင်မယ့် ဂဏန်းမဆလာ စတဲ့ဟင်းလျာတွေကို ထိုင်းစားဖိုမှူးတွေကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ထိုင်းရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကို အပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Thai Taste ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ပုံမှန်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တွေအတွင်း သွားရောက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင် ကျပ်(၇၅၀၀)ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပေမယ့် မတ်လကနေစပြီး မနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ညနေ(၃)နာရီ (Happy Hour) အတွင်းသွားရောက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ (၅၀၀၀)ကျပ်သာကျသင့်မှာဆိုတော့ ? ? လုံးဝအမေးဇင်းနော်။ ထိုင်းရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကို တမြေ့မြေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် ဧည့်ခံကြိုဆိုမှုတွေအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ သွားစားကြည့်ရင် လုံးဝကြိုက်သွားမှာအသေအချာပါပဲနော်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ည(၁၁)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/thaitaste
In Restaurant Guides Tagged Thai Food Leaveacomment
ထိုင်းစတိုင် ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်လေးကို အိမ်မှာတင်ချက်ပြုတ်ကြရအောင်